Ngale Veki: Mpelaveki yokuQalisa i-Indianapolis | Martech Zone
NgoLwesibini, nge-2 kaDisemba ngo-2008 NgoLwesibini, Oktobha 4, 2011 Douglas Karr
Impelaveki yokuqalisa sisiganeko seyure ezingama-54 esidibanisa abaphuhlisi bewebhu abanetalente kunye nenkuthazo, abaphathi beshishini, amagcisa emizobo, ukuthengisa igurus, kunye nabathandi bokuqalisa ukwenza iinkampani ukusuka kumxholo wokumilisela!
I-Indianapolis iya kubamba umsitho wayo wokuQalisa ngeVeki nge-5 kaDisemba? I-7th kwiSikolo sePurdue sobunjineli kunye neTekhnoloji kwiziko le-IUPUI edolophini.
Umnyhadala uqala ngentsimbi yesihlanu emva kwemini ngolwesiHlanu kaDisemba nge-5. Abathathi-nxaxheba bavota kwiinkampani abangathanda ukuzenza kunye nokudibana kumaqela ngokusekwe kumdla nakwiseti yezakhono. Amaqela asebenza kwiinkampani zawo kwimpelaveki yonke ephetha ngomboniso wemveliso ngeCawa yangokuhlwa nge-5 kaDisemba. Abatyalomali bamkelekile ukuba bazimase le ntetho yokugqibela.
Ukongeza kubathathi-nxaxheba, iVeki yeveki yokuqalisa yenziwa ukuba yenzeke ngesisa sabaxhasi kuluntu lwasekhaya. Ulawulo lomsitho ngoku lukhangela abaxhasi ukunceda ukuhlawula iindleko zokubamba umsitho. Ukuba ungathanda ukuba ngumxhasi okanye ungathanda ukufumana ulwazi oluthe kratya ngalo msitho nceda undwendwele iwebhusayithi http://indianapolis.startupweekend.com/.
? Ngempelaveki yokuqalisa yindawo entle hayi kuphela ukunxibelelana nabanye oosomashishini kodwa ukwenza izakhono zakho kunye nomdla kwimeko yeshishini lokwenyani. Impelaveki yase-Indianapolis iyakwenza ukuba i-Indiana ibe lilizwe lokuqala ukubamba iimpelaveki ezintathu? Utshilo uLorraine Ball, uMongameli waBenzi bemvula kunye noMsunguli weNtengiso yeRoundpeg
Impelaveki yokuQala, i-LLC isekwe ngaphandle kweBoulder, eColorado kwaye iququzelele imicimbi yeveki ukusuka esixekweni ukuya esixekweni njengoko kuvotelwe kwiwebhusayithi yayo, http://startupweekend.com/.
Iziganeko zangaphambili zeVeki yokuQalwa kweVenkile ebibanjelwe eBloomington, IN nase West Lafayette, IN. Uninzi lweenkampani ezenziweyo ngeempelaveki ezidlulileyo bezisekwe kwiwebhu kwaye uninzi luye lwaba ngamashishini afanelekileyo.
tags: Guy KawasakizigqiboSocial Media Marketingukulandelela ababhali